Daarektera FBI James Comey yoo galma wal gahi USA, Capitol Hill keessatti waan biiroo isaa gaafatanif deebii kenna.Caamsa 3,2017
Raashiyaan dorgommii filannoo Amerikaa irratti Tiraampi gargaaruuf filannoo Amerikaa dhossaan keessa seenuu, oduun dhaabii WikiLeaks Hilarii Kilinton miidhuuf odeeffannoo baase odeeffannoon FBI filannoon dhiyaannaan waan Hilarii Kilintoniin qoratan haaraa ummatatti himuu fi waan hedduu irratti deebii kennaan bulchootii tun.
Akka daarekterii FBI, James Comes jedhetti qorannoon ergaa email Hilarii Kilinton keessatti akka wantii haarahii argamtee qorachuf jedhanii filannoon duratti gadi baasuun “waan miira nama hammeessaati.,” taatullee dubbii dhugaa gadi baasuuf woma bahuu qabaati.
Adoo qorannoon ergaa email Hilarii Kilintoniin haarahii bahuu baatee akka jecha daarektera kanaatti badii guddoo taati.“Murtii jajjabduu taatullee ammallee akka kiyyatti qornnoo sun irra deebihanii banuun waan barbaachisaa.”
Hilarii Kilinton,ministerii haajaa alaa Amerikaa ka durii fi eegee ammoo pirezidaantii tahuuf dorgomte xalyaa daarkterii FBI akka waan balleessaan haarahii email mootummaan Amerika aka Hilarii Kilinton gaafa ministera haajaa alaa taatetti ittiin hojjachaa baate keessatti arganii barreessee, odeeffannoon dharaa dhaabii WikiLeaks odeeffannoo duula filannoo isii keessa seenetti filannoo tana na jisse jetti.
Miseensotii koree haqaa kongireesii Amerikaa kun tana maleellee waan hedduu irratti bulchoota FBI qoratan.